Indawo Yokuhlala Entofontofo 'Toti - I-Airbnb
Indawo Yokuhlala Entofontofo 'Toti
Amanzimtoti, KwaZulu-Natal, eMzantsi Afrika
Ilula, ihonjiswe kakuhle kwaye itofotofo. Igumbi onokulisebenzisa ngoxa ubuka intliziyo yedolophu entle engaselwandle yase Amanzimtoti. Ibekwe ngaphakathi kwe-3 ukuya kwi-5 km yonxweme, le flethi yegadi inika ithuba lokuzonwabisa ngeentsuku eziqaqambileyo, ezinelanga.
Igumbi elitofotofo elinebhedi enkulu enokuhlulwa ibe ziibhedi eziyi-2 xa ucela. Indlu inekhitshi evulekileyo negumbi lokuhlambela. Iti eyongezelelweyo kunye nesihluzi/ikofu ekhawulezayo ziyafumaneka.
Iflethi inamagumbi ayi-2. Igumbi lokulala lineebhedi ezilala umntu omnye/ibhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle. Indawo yokuxhoma kunye netafile zinika indawo yokuxhoma iimpahla kunye nokugcina iisuti. Onke amashiti neetawuli ziyafumaneka.
Igumbi lokuhlambela linendlu yangasese, isitya neshawa. Kukho isepha nephepha langasese.
Ikhitshi liquka ifriji, iketile kunye nento yokupheka. Zonke izinto eziyimfuneko ezisisiseko ezifunekayo ukuze kuphekwe zinikezelwe. Kwelinye igumbi kukho ibhedi yosuku iindwendwe ezinokuphumla ngayo emva kokubona usuku oluxakekileyo okanye inokusetyenziswa njengebhedi yondwendwe olongezelelekileyo.
Kukho izitulo eziphezulu kunye ne-braai yegesi ngaphandle kwegumbi. Ukongezelela, iindwendwe zivumelekile ukuba zisebenzise ipuli yokuqubha. Indawo yokupaka igcinelwe iindwendwe kuphela.
4.83 · Izimvo eziyi-135
Amanzimtoti izele ziindawo ezintle ezifana ne- "Baggies Beach", ivenkile yekofu ebonisa kakuhle ulwandle kunye neemayile zeevenkile zesibini ezinezinto zakudala nefenitshala.
Izitshixo ziza kunikwa xa iindwendwe zifika naxa ziphuma. Kusenokwenzeka andisoloko ndifumaneka ukuze ndamkele iindwendwe; kodwa ke, kusoloko kukho ubuso obunokukulindela. Iindwendwe zivumelekile ukuba zibuze imibuzo xa kuyimfuneko. Iindawo zokuhlala zentsapho zahlukile kuAirbnb. Iindwendwe zivumelekile ukuba ziqhagamshelane nam kwiselfowuni yam ukuba kukho naziphi na iingxaki. Kuya kusoloko kukho umntu onokuphendula nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo.
Izitshixo ziza kunikwa xa iindwendwe zifika naxa ziphuma. Kusenokwenzeka andisoloko ndifumaneka ukuze ndamkele iindwendwe; kodwa ke, kusoloko kukho ubuso obunokukulindela. Iindwend…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Amanzimtoti